Famantarana 12 atrehinao miaraka amin'ny mpahay zava-mahadomelina maloto - Mpanararaotra
Famantarana 12 atrehinao miaraka amin'ny mpahay zava-mahadomelina maloto
Ny zava-mahadomelina mahatsiravina dia zavatra iray izay nahazo fahitana marobe tato ho ato. Ankehitriny dia resahina betsaka amin'ny toe-javatra samihafa sy olona, ​​fandaharana ary famoahana olona marobe.
Rehefa nipoitra ny tantara momba ny fanararaotana rongony amin'ny fifandraisana isan-karazany, dia sendra olona iray mpihinan-doza ilay niharam-boina.
Satria ireo toetra mamorona Narcissists Personality Disorder (NPD) dia samy mipetraka ao anaty elanelam-potoana iray, noho izany ny narcissism koa dia tonga amin'ny ambaratonga henjana.
Misy ireo izay mety ho voamarina ara-drariny ho manana NPD izay tsy iza fa ireo namana, mpiara-miasa, olona ao amin'ny fianakaviana ary olom-pantatrao izay mety hirehareha matetika.
Ankoatry ny fihenan-tsasatra kely sy sarotra tadiavina amin'ny heviny lalina na misy dikany dia mety ho izy ireo koa somary tsy mampaninona, mahasoa na dia ny teny fanalahidy - dia mety hiteraka fahavoazana na fanelingelenana mihitsy aza).
mahazo fifandraisana indray amin'ny laoniny
Narcissist maloto iray mipetraka eo amin'ny faran'ny spectrum misy ny fiantsoana ireo toetra ratsy.
Miaraka amin'ny toetra narcissist mahery vaika kokoa, ireo olona ireo dia mirona hizara ny toetran'ny Antisocial Personality Disorder (APD), psychopathy, ary karazana aretina hafa.
Na dia tsy ekena ho aretina misaraka amin'ny asan'ny mpitsabo aretin-tsaina aza ny rongony mahatsiravina, dia azontsika atao ny mamaritra azy na izany aza.
Hodinihina ato amin'ity lahatsoratra ity ireo toetra mampifandray akaiky indrindra amin'ny mpifoka rongony maloto.
Tsara ny mitadidy amin'ny fotoana rehetra fa ny tsirairay amin'ireo toetra ireo dia hanana karazany manokana. Tsy misy toetra roa mitovy ary ny fambara sasany dia mety hisongadina kokoa noho ny hafa arak'ilay olona.
Na dia tsy maniry hanome lanja lehibe kokoa ny toetra iray aza ny iray hafa, ireo izay miseho avo kokoa amin'ity lisitra ity dia mifandray akaiky kokoa amin'ilay voafaritra. mamohehatra zava-mahadomelina ezahinay faritana. Ireo izay mankany amin'ny farany ambany dia hita amin'ny endrika tsy fahita firy.
Ny famaritana ny malignant, araka ny Dictionary.com dia: 'vonona hiteraka fahavoazana, fijaliana, na fahaketrahana fanahy iniana tsapanao na mampiseho lolompo na fankahalana.'
Ity dia mamaritra tanteraka ny iray amin'ireo toetra mampiavaka ilay narcissist maloto: ny sadisma.
Ny sadista dia mahazo fifaliana amin'ny fanaintainana, fijaliana ary fanalam-baraka ny hafa. Ataon'izy ireo an-tsitrapo izany fijaliana izany hanomezana fahafaham-po ny tenany sy hifehezana ny hafa. Mety hiseho amin'ny fanararaotana am-bava, ara-pihetseham-po, ary ara-batana mihitsy aza izany.
Mety hiseho koa amin'ny fomba itondrany ny biby sy ny tsy firaharahiany ny herisetra amin'ny sarimihetsika, fandaharana amin'ny fahitalavitra, ary amin'ny vaovao.
2. Fanodinkodinana mavitrika
Ny mpifoka rongony rehetra dia manodikodina amin'ny ambaratonga sasany, ny fombany hahazoana izay tadiaviny.
Saingy misy endrika samihafa ny fanodikodinana. Misy ireo izay mpanararaotra, izay mitady hanararaotra ireo hetsika na manararaotra na iza na iza amin'ny fanjakana marefo.
Avy eo misy hafa - ireo karazana mampidi-doza - izay mavitrika amin'ny fanodikodinany. Amin'izany dia midika izahay fa tsy miandry zavatra hitranga izy ireo ary avy eo mamaly izany, dia hanodikodina tahaka ny rehefa mahatsapa ny filàna izy ireo.
Raha ny marina, dia mahazo fahafinaretana be toy izao izy ireo amin'ny fanodikodinana ny hafa toa ny mampijaly azy ireo. Angamba tsy dia nahagaga loatra izany satria ny fanodikodinana matetika dia miteraka fijaliana.
Mahery vaika kokoa izy ireo ary tsy dia malemy paika amin'ny fomba fanodikodinany ny hafa, nefa koa mampiasa tetika marobe kokoa avy amin'izy ireo fandrehitra ny fitiavana baomba .
Ireo fihetsika fanodikodinana ireo dia isaina, kasainaina, hajaina mandritra ny taona maro mandra-pahatongany any amin'ny tampon'ny fahombiazany. Ity dia iray amin'ireo loza ateraky ny rongony mahatsiravina - ny fahalalahana misafidy ho an'ny niharam-boina dia nahena ary nanjary tsy afa-manoatra intsony izy ireo hanala ny tenany amin'ny toe-javatra.
3. Fihetsika tsy mifanohitra amin'ny fiaraha-monina
Raha jerena fa ny zava-mahadomelina mahatsiravina dia miampita amin'ny Antisocial Personality Disorder, dia mety tsy hahagaga raha maheno fa mirona amin'ny karazana fitondrantena antisocial izy ireo.
Matetika izy ireo mpandainga pathological , misoloky, mangalatra, mora zaka toe-tsaina miovaova , herisetra ary fankahalana tsy misy porofo.
Miady amin'ny tolona izy ireo - ny ady rehetra, na iza na iza, amin'ny fotoana rehetra. Izy io dia ampahany amin'ny endrika manimba ny fitondran-tena mahadomelina.
4. Hensensitivity amin'ny fitsikerana
Mitsikera ny narcissist maloto amin'ny loza mety hitranga ianao.
Ny sasany amin'ireo marary ao amin'ny NPD dia midina lavitra kokoa amin'ny ambaratonga dia mety afaka mamono tsikera satria heverin'izy ireo ho mampihomehy sy vazivazy - lavorary tokoa izy ireo.
Ny sasany mahita ny endrika fitsikerana ho fanakorontanana ny toetrany ary mandeha manafika izy ireo na dia kely aza.
miaina isan'andro amin'ny fahafenoana
Marefo ny fahatsapan'izy ireo tena ka mora simba, ary ny valifaty na ny fiakarana no hany fomba fantatr'izy ireo amin'ny fahatsapany tsara ny tenany.
Tsy matoky olona na iza na iza ny mpifoka rongony maloto. Ny mifanohitra amin'izay no izy, raha ny marina. Miahiahy be loatra amin'ny rehetra izy ireo ary mino ny hafa hivoaka haka azy ireo.
Mety hitranga izany satria mitady hanodikodina ny hafa izy ireo ho an'ny tombotsoany manokana, ary hino izy ireo fa toy izany koa ny fihetsiky ny hafa (na manana ny fahafahany).
Ity paranoia ity dia mety hiteraka toe-tsaina feno fiambenana izay mailo hatrany izy ireo amin'ny fandrahonana. Izy ireo dia mety hanjary variana amin'ny zavatra ataon'ny olon-kafa izay matetika mitarika azy ireo hifehezana ny fihetsiky ny niharam-boina noho ny tahotra ny zavatra mety hataony na lazainy raha tsy izany.
6. Tsy fahampiana fiaraha-miory
Ny mpandinika zava-mahadomelina rehetra dia tsy manana fangorahana amin'ny ambaratonga sasany, fa toy ireo toetra rehetra ireo dia misy spectrum.
Araka ny efa noresahintsika, ny karazana mampijaly dia hampijaly ny hafa amin'ny fomba faly. Tsy miraharaha sy manala ny fihetsem-po asehon'olon-kafa koa izy ireo.
Ny zavatra iray manamarika dia ny mety ho ny mpifoka rongony tsy dia mampidi-doza dia mety hiaina fiaraha-miory, saingy matetika izy ireo - na dia tsy matetika aza - tsy manaiky hamela azy ireo hitaona azy ireo. Mety hiaina nenina na nenina amin'ny lafiny sasany aza izy ireo.
Ny mpitsabo tena mahatsikaiky dia tsy afaka mahatsapa fangoraham-po tanteraka. Tsy afaka mametraka ny tenany amin'ny kiraron'olon-kafa izy ireo na mifandray amin'ny fihetseham-pony. Hevitra vahiny tanteraka ho azy ireo izany. Mahatsapa izy ireo ary tsy mampiseho fanenenana amin'ny fahoriana mahazo azy ireo ary izany no fomba ahafahan'izy ireo mitondra tena amin'ny fomba ratsy toy izany.
Ny fomba Rock Grey amin'ny fiatrehana ny mpitsabo rehefa tsy misy fifandraisana dia tsy safidy
Zavatra 8 tsy azon'ny mpitsabo mpanampy atao aminao (na olon-kafa)
Ny mpandika teny amin'ny fiteny dia ampiasaina hanodinkodinana sy hanaovana traumatisme ireo niharam-boina
Ahoana no fomba hiatrehana ny mpitaona zava-mahadomelina: ny fomba tokana hiasana
Ahoana ny famelana ny narcissist + miatrika ny mekanisma handrosoana
Ilay Rollercoaster fanarenana avy amin'ny fanararaotana narcissistic
7. Tsy fahombiazana amin'ny fandraisana andraikitra
Tsy mora foana ny mandray andraikitra amin'ny hetsika ataontsika - tsy izany ihany no zava-misy ho an'ny mpifoka rongony.
Saingy mamindra zavatra amin'ny sehatra hafa izy ireo. Indraindray izy ireo dia hanaiky fa nanao fihetsika tamina fomba iray izy ireo, fa kosa hialana amin'ny fahamarinana kosa izy ireo mba hahatonga azy ireo ho toa marina fa nanao izany. Hampiasan'izy ireo amin'ny zavatra na olon-kafa ny andraikitra (amin'ny teny hafa, milalao ny lalao manome tsiny).
Indraindray izy ireo dia mety handà tsy hanaiky fa diso na tsy ekena ny fihetsik'izy ireo. Holavin'izy ireo ny andraikitra amin'ny ratra naterak'olon-kafa na ny vokatra tsy faniry hafa mety naterak'izy ireo.
8. Mila dinihina
Mila endrika famatsiana avokoa ny narcisista rehetra. Izany hoe mila ny fijerena matetika, ny fitsaohana ary ny fitiavan'ny hafa izy ireo mba hahatonga azy ireo hahatsapa ho tsara sy hamerina ny haavon'ny angovo.
Mamahana izany izy ireo.
Ambany ambany na narcissist antonony Mety hikatsaka endrika fiheverana tsara indrindra hanamafisana ny fahatsapany tena mendrika. Ny mpifoka rongony mampidi-doza dia mety hahazo fahafaham-po saika amin'ny fijerena ratsy.
Mety faly izy ireo milalao ilay olon-dratsy ary, araka ny efa nolazainay tetsy ambony, tsy matahotra ny fifanandrinana sy ny ady amin'ny toe-tsaina, fahalalàna na ara-batana izy ireo.
Ity toetra ity dia iray amin'ny toerana izay tsy dia mifanindry loatra amin'ny olona iray izay voan'ny Antisocial Personality Disorder na psychopathy.
Matetika izy ireo dia tsy miraharaha izay eritreritry ny olon-kafa momba azy ireo ary indraindray dia aleony ho manirery fa tsy ny foiben'ny fifantohana.
Ny narcissists dia mahatsapa ny maha-zava-dehibe azy. Mino izy ireo fa tsara noho ny hafa amin'ny lafiny rehetra: manintona kokoa, manan-tsaina kokoa, mahomby kokoa, manan-danja kokoa.
Ity fianjerana ity no fototr'ireny fahatsapana ny fahamendrehana . Satria mino izy ireo fa ambony noho ny olon-drehetra, dia heverin'izy ireo fa ilaina ny hitondrana toy izany.
Hira lohahevitra wwe kurt zoro
Averina indray, tsy dia fahita izany amin'ireo izay manana APD.
Satria manaja tena toy izany izy ireo, raha sendra olona manana toetra na fomba fiainana na fananana iriny izy ireo, dia feno fialonana.
Halan'izy ireo ny mahita ny hafa amin'ny zavatra tsy ananany. Rehefa manao izany izy ireo dia hanambany azy ireo ary hametraka amin'ny laoniny ny fananany an'io zavatra io. Mahalana izy ireo no miaiky fa misy olona mendrika an'izany zavatra izany.
Raha miseho ny tenany, dia tsy matahotra ny hanadino ny fahombiazan'ny olona iray izy ireo amin'ny fanomezana torohevitra ratsy na fanosehana ny lazan'ny olona.
Ary mifaly amin'ny tsy fahombiazan'ny hafa izy ireo - angamba tsy miharihary (na dia mety hitranga aza izany), saingy azo antoka fa ao anaty izy ireo dia hanao dihy faly.
Amin'ny maha mpampihomehy ahy dia momba ahy sy tenako ary izaho daholo no anaovan'izy ireo ny tombontsoany fa tsy an'ny olon-kafa.
Miresaka momba ny tenany izy ireo, maro no mankafy ny hisongadina, manala baraka ny hafa izy ireo, ary manahy fatratra ny fisehoany ivelany sy ny hevitry ny olon-kafa momba azy ireo izy ireo.
Hitan'izy ireo ho toy ny zava-misy marina ny zavatra inoan'izy ireo, fohy ny fahitana sy tery saina ary mora manadino ny toe-javatra sarotra iray mifanaraka amin'ny fomba fijerin'izy ireo.
Ny ankamaroan'ny mpifoka rongony dia manana ny fahaizany mampirehitra ny haingo rehefa mila izany. Raha ny marina, rehefa vao mihaona amin'ny iray ianao dia mety ho olona sariaka sy tia mandray olona izy ireo.
Izany no ahafahan'izy ireo mamandrika ireo tra-boina. izy ireo manaova sarontava ary mitandrema mba tsy hamelany azy io mandra-pahatongan'ny olona voadoka sy simbaina tsara ny lasibatr'izy ireo.
Na dia tsy ianao aza no tanjon'izy ireo voalohany, dia hiezaka izy ireo ny hampiasa fitafiana manafintohina mba hahatonga anao hanao zavatra amin'ny fomba iray na hanana fomba fijery manokana momba azy ireo
Diso sy sandoka daholo izany mazava ho azy fa tsy miteny na manao zavatra mahafinaritra amin'ny fahatsorana rehetra izy ireo.
Noho izany, ny mpifoka rongony maloto iray dia heverina ho olona iray izay mifanohitra amin'ny aretina Narcissistic Personality Disorder (NPD) sy ny Antisocial Personality Disorder (APD).
Na dia mety hampiditra ny toetra nentin-drazana rehetra aza izy ireo, dia tsy hitovy amin'ny olona manana APD na psychopath.
Izy ireo koa dia hanana fironana narcissistic mihoapampana kokoa noho ny mpifoka rongony hafa, indrindra any amin'ny faritra misy ny fanararaotana ny hafa, ny herisetra ary ny fanodikodinana.
Izy ireo dia karazana karazan-drongony mahery vaika, mpanararaotra, ary mampidi-doza ary iray izay tokony hialana amin'ny vola rehetra.
iza no nia jax ray
maninona ny vadiko tsy mila ahy
rehefa misy lehilahy misintona mandra-pahoviana no maharitra